Cilmi-baareyaasha istiraatiijiyadeed ee labaad ee ugu muhiimsan waxay isticmaali karaan xogta la-socodka ah ee saadaalinta . In la sameeyo mustaqbalka mustaqbalku waa mid aad u adag, oo laga yaabo inay sababtu tahay, saadaashu hadda ma aha qayb ballaadhan oo cilmi bulsheed ah (inkastoo ay tahay qayb yar oo muhiim ah oo ah daraasadda, dhaqaalaha, epidemiology iyo sayniska siyaasadeed). Hase yeeshee, waxaan jeclaan lahaa inaan diiradda saaro nooc gaar ah oo la saadaalinayo oo la yiraahdo " currentcasting " oo laga soo qaatay isku-dhafka "hadda" iyo "saadaashii". Halkii laga sii dayn lahaa mustaqbalka, marxaladda isku dayaysa in la isticmaalo fikrado ka imanaysa saadaalinta si loo cabbiro xaaladda hadda jirta ee aduunka; waxay isku daydaa inay "saadaaliso xaadirka" (Choi and Varian 2012) . Soo bandhigidu waxay leedahay karti gaar ah in ay si gaar ah faa'iido u leedahay dawladaha iyo shirkadaha u baahan qiyaasaha iyo saxda ah ee adduunka.
Mid ka mid ah meeleeynta meesha baahida loo qabo jadwalka wakhtiga iyo saxda ah waa mid aad u cad cirridi. Tixgeli kiisaska hargabka ("hargabka"). Sannad kasta, faafidda ifilada xilliyeed waxaa keena malaayiin cudur iyo boqolaal kun oo dhimasho ah oo adduunka ah. Dheeraad ah, sanad walba, waxaa suurtagal ah in qaab cusub oo hargabka ah uu soo baxo oo dili kara malaayiin. Tusaale ahaan, 1918 infalawansada dillaacay, ayaa lagu qiyaasey in ay dileen 50 ilaa 100 milyan oo qof (Morens and Fauci 2007) . Sababtoo ah baahida loo qabo in lala socdo oo laga yaabo inay ka jawaabto hargabka faafa, dawladaha adduunka oo dhan waxay sameeyeen nidaamyada ilaalinta hargabka. Tusaale ahaan, Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada Maraykanka (CDC) si joogta ah oo si nidaamsan u ururiya macluumaad ka soo jeeda dhakhaatiiryo si taxadar leh loo soo doorto dalka. Inkasta oo nidaamkani uu soo saaro xog tayo sare leh, waxa uu leeyahay wargelin la xiriirta. Taasi waa, sababtoo ah waqtiga ay qaadato xogta ka imanaysa dhakhaatiirta in la nadiifiyo, la shaqeeyo, lana daabaco, nidaamka CDC ayaa sii deynaya qiyaasaha inta uu leeg yahay hargabka laba toddobaad ka hor. Hase yeeshee, marka la qabanayo cudurrada faafa, saraakiisha caafimaadka dadweynaha ma rabaan inay ogaadaan inta hargabku jiro laba toddobaad ka hor; waxay rabaan inay ogaadaan inta hargabku jiro hadda.
Isla mar ahaantaana CDC ay ururinayso xogta si loo dabagalo hargabka, Google ayaa sidoo kale ururiya xogta ku saabsan hargabka, inkastoo qaabab kala duwan. Dadka ka socda adduunka oo dhan waxay si joogto ah u diraan garsooraha Google, qaar ka mid ah su'aalahan - sida "dawooyinka hargabka" iyo "calaamadaha ifilada" -ka waxa ay tilmaamayaan in qofka samaynta baaritaanka uu hargab yahay. Laakiin, adigoo isticmaalaya su'aalahan raadinta si loo qiyaaso faafitaanka hargabka waa mid dhib badan: qof kasta oo qaba hargabku wuxuu sameeyaa baaritaanka hargabka, mana aha raadin kasta oo la xiriira hargabka oo ka yimaado qof qaba hargab.
Jeremy Ginsberg iyo koox ka mid ah asxaabta (2009) , qaar ka mid ah Google iyo qaar ka mid ah CDC, waxay lahaayeen fikradda muhiimka ah ee xariif ah si ay isugu keenaan labadan xogood. Qiyaas ahaan, iyada oo la adeegsanayo nooc ka mid ah tirakoobyada tirakoobka, cilmi baarayaashu waxay isku dhafan yihiin xog raadinta degdegga ah oo aan sax ahayn oo la socda xogta gaaban iyo saxda ah ee CDC si ay u soo saaraan cabbiraad degdeg ah oo sax ah ee hargabka faafa. Siyaabo kale oo looga fikiro waxa weeye in ay isticmaalaan xogta raadinta si loo dedejiyo xogta CDC.
Gaar ahaan, gaar ahaan, isticmaalka xogta laga soo bilaabo 2003 ilaa 2007, Ginsberg iyo asxaabtu waxay ku qiyaaseen xidhiidhka ka dhexeeya faafitaanka hargabka ee xogta CDC iyo mugga raadinta 50 milyan oo erey oo kala duwan. Laga soo bilaabo geeddi-socodkan, kaas oo si buuxda xog-ujoogsaday oo uma baahnin aqoon aqoon oo takhasus leh, cilmi-baarayaashu waxay soo heleen 45 su'aalood oo kala duwan oo u muuqday in ay yihiin saadaalinta saadaasha xogta hannaanka CDC. Ka dib, isticmaalka xiriirka ay ka barteen xogta 2003-2007, Ginsberg iyo jaaliyadaha ayaa tijaabiyay qaabkoodii intii lagu jiray xilligii influenza ee 2007-2008. Waxay ogaadeen in nidaamyadoodu ay dhab ahaantii samayn karaan faa'iido iyo xaqiiqooyin ah (Tirada 2.6). Natiijooyinkan waxaa lagu daabacay Xayawaan waxaana lagu soo bandhigay daboolka saxaafadda. Mashruucan-oo loo yaqaan 'Google Flu Trends' - ayaa noqday masawir badanaa soo noqnoqda oo ku saabsan awoodda xogta weyn si loo beddelo dunida.
Jaantus 2.6: Jeremy Ginsberg iyo jalayaashiisa (2009) isku dhafay xogta raadinta Google iyagoo xogta CDC si ay u abuuraan Google Flu Trends, taas oo sii wadi karta heerka jirrada hargabka (ILI). Natiijooyinka ku jira shaxdan waxaa loogu talagalay gobolka dhexe ee Atlantic ee sanadka 2007-2008. Inkasta oo ay markii hore ahayd mid aad u balanqaad ah, waxqabadka Google Flu Trends ayaa dhicisoobay waqtigiisii (Cook et al. 2011; Olson et al. 2013; Lazer et al. 2014) . Waxaa laga soo qaatay Ginsberg et al. (2009) , sawirka 3.
Si kastaba ha ahaatee, sheekada guusha ee muuqata ayaa ugu dambeyntii ku soo noqotey wax laga xishoodo. Waqti ka dib, cilmi-baarayaashu waxay soo heleen labo xuduudood oo muhiim ah kuwaas oo ka dhigaya Google Flu-is-beddel aan ka yareynin markii hore markii hore. Ugu horreyntii, waxqabadka Google Flu Trends dhab ahaantii kama fiicnayn habka sahlan oo qiyaasta qiyaasta hargabka oo ku salaysan xudduud aan toos ahayn oo ka soo baxday labadii heer ee ugu dambeeyey ee faafitaanka hargabka (Goel et al. 2010) . Iyo, muddo ka dib, Google Flu Trends dhab ahaantii wuu ka sii daray habkan fudud (Lazer et al. 2014) . Si kale haddii loo dhigo, Google Flu Trends oo leh xogta oo dhan, barashada mashiinka, iyo xisaabtanka awoodda badani si muuqata uma dhicin wax fudud oo si sahlan loo fahmi karo. Tani waxay soo jeedineysaa in marka la qiimeeyo saadaalinta ama wax-ka-qabashada, waxaa muhiim ah in la isbarbardhigo ka soo horjeeda xuddunta.
Qodobka labaad ee muhiimka ah ee ku saabsan Google Flu Trends waa in awoodiisa lagu saadaaliyo xogta hargabka ee CDC waxay u nugul tahay fashil la'aanta wakhtiga gaaban iyo burburka muddada fog sababtoo ah qulqulka iyo algorithmic wareer . Tusaale ahaan, inta lagu guda jiro sannadkii 2009 Fluorinka Fluugga Google Google Flu Trends ayaa si aad ah u qiimeeyey xaddiga hargabka, malaha sababta oo ah dadku waxay u muuqdaan in ay bedelaan dhaqankooda raadinta iyaga oo ka jawaabaya cabsida ba'an ee faafka caalamiga ah (Cook et al. 2011; Olson et al. 2013) . Marka lagu daro dhibaatooyinka wakhtiga gaaban, waxqabadka si tartiib tartiib ah ayuu u burburay wakhti ka dib. Ogaanshaha sababaha suurtogalnimada muddada dheer ayaa adkaata sababta oo ah algorithm search for Google waa macaamiishu, laakiin waxay u muuqataa in 2011 Google uu bilaabay inuu soo jeediyo shuruudaha raadinta ee la xidhiidha marka ay dadku raadsadaan calaamadaha hargabka sida "qandho" iyo "qufac" (waxay sidoo kale u muuqataa in Qalabkani ma aha mid firfircoon). Ku darida tafaasiilkan waa wax macquul ah oo macquul ah oo la sameeyo haddii aad ku socoto mashiinka raadinta, laakiin isbeddelka algorithm wuxuu saameyn ku yeeshay baaritaanno badan oo la xiriira caafimaadka kaas oo keeney Google Flu-isbedelka kor u qaadista faafitaanka (Lazer et al. 2014) .
Labadan duulimaad ayaa sii adkeynaya mustaqbalka dadaalkooda, laakiin ma ayan xalin. Xaqiiqdii, adigoo isticmaalaya habab badan oo taxadir leh, Lazer et al. (2014) iyo Yang, Santillana, and Kou (2015) waxay awoodeen inay ka fogaadaan labadan dhibaato. Horumarinta, waxaan rajeynayaa in daraasado fara badan oo isku xira ilaha xogta badan ee xogta la ururiyay ay ku siin doonaan shirkadaha iyo dawladaha inay abuuraan qiyaaso iyo waqtiyo sax ah oo ay ku xisaabtamaan wax kasta oo qiyaasta ah oo la sameeyo si joogto ah waqtigooda. Mashruucyada hadda socda sida Google Flu Trends ayaa sidoo kale muujinaya waxa dhici kara haddii ilaha xogta waaweyni ay la socdaan macluumaad badan oo dhaqameed oo loo sameeyay ujeedooyinka cilmi-baarista. Ka fekerida farshaxanka farshaxanka ee cutubka 1, ayaa hadda u muuqata inay suuragal tahay in la isku daro diyaaradaha Duchamp-style-ka ah oo leh miisaaniyada Michelangelo si ay u siiyaan go'aamiyayaal leh qiyaaso go'an iyo ka badan oo saxda ah ee hadda iyo saadaasha mustaqbalka dhow.